Kiiska Xamdi Maxamed Faarax oo maanta furmaya | KEYDMEDIA ONLINE
22 January 2021 2 Ruux oo ku geeriyootay Xeebta Hobyo
Kiiska Xamdi Maxamed Faarax oo maanta furmaya
Xamdi ayaa sii arxan darro ah oo ka baxsan diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeed loogu kufsaday kadibna looga soo turey dabaq 6 biyaano ah oo ku yaalla degmada Waaberi habeenkii Jimcaha ee lasoo dhaafay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Maanta oo Arbaco ah ayaa lagu wadaa in Maxkamadda gobolka Banaadir la horkeeno eedeysanayaal dhowr ah oo loo haysto dilka iyo Kufsiga Xamdi Maxamed Faarax.
Keydmedia Online ayaa ogaatay in Kiiskaan loo xiray kow iyo toban Qof, kuwaaso maanta la horgeynayo Maxkamadda gobolka Banaadir.
Kiiskaan ayaa laga yabaa in la musuqo, misane Xamdi ay cadaalad weyso, xilli shalay kulan ay Muqdisho ku yeesheen ehlada Xamdi ay dalbadeen cadaalad.
Dadka Maxkamadda lasoo taagayo waxaa ku jira wiilkii sheegay in isagagu iyo Xamdi ay xiriir lahaayeen, kadibna Hoteelka ku balamiyey.
Xamdi Maxamed Faarax (12 Jir), oo ahayd gabar aad u da'yar, kana baxday sanadka Dugsiga Sare ayaa billowgii Sebtember lagu kufsaday magaaladda Muqdisho, iyadoo kadibna laga soo tuuray dabaq lix biyaano ah.
Kiisaska Kufsiga ayaa Soomaaliya kusoo kordhaya mudooyinkan, waxaana dhawaan degmada Shangaani lagu kufsaday wiil 10 jir ah, iyadoo falkan ay geysteen askar katirsan Militeriga dowladda uu hogaamiyo Farmaajo.
Horaantii sanadkan, Afgooye waxaa lagu kufsaday labo gabdhood oo walaalo ah, oo 3 iyo 4 jir ah, iyadoo kasii horeeyay kufsi gabadho ay Ciidamada dowladda uga geysteen degaanka Janaale oo dhawaan kala wareegeen Al-Shabaab.
Xadgudubyada jinsiga ku salaysan iyo kufsiga ayaa kusoo badanayay Soomaaliya sanadihii lasoo dhaafay, iyadoo tacadiga loo geysto dumarka ay kamid noqdeen dhacdooyinka maalin-laha ah ee dalka ka dhaca.
2 Ruux oo ku geeriyootay Xeebta Hobyo
2 Ruux ayaa ku geeriyootay xeebta Hobyo, sida ay noo xaqiijiyeen dad ku sugnaa magaalada Hobyo oo aan xiriir la sameynay.